Qarax ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidammada dowladda Soomaaliya oo ka dhacay Magaalada Muqdisho | raascasayrmedia.com
← Xassan Daahir iyo ururkiisa Xisbul Islaam oo ku biiray Al-Shabaab
Faaqidaada horyaalada naadiyada qaarada Yurub ee asbuucaan dhacay →
Qarax ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidammada dowladda Soomaaliya oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
Ugu yaraan shan qof oo afar ka mid ah ay ahaayeen ciidammada dowladda Soomaaliya, ayaa ku dhintay qarax maanta lagula eegtay jidka warshadaha, gaar ahaan agagaarka kulliyadii hore ee Jaalle Siyaad.
“Qaraxa wuxuu ka dhacay gaari ay ciidammada wateen, waxaana arkay dhimashada afar askari iyo haweeney rayid ah oo qaraxu uu ku dilay meel ku dhow halka uu ka dhacay, gaarigii oo dhanna wuu burburay” ayuu HOL u sheegay goobjooge halkaas ka dhawaa.
Sidoo kale, waxaa qaraxa ku dhaawacmay saddex askari oo kale, kuwaasoo la geeyay dhaawacooda isbitaalka Madiina, waxaana la xaqiijiyay in qaraxu ka dhashay miino ay ciidammada dowladdu kasoo saareen agagaarka kulliyada.
Goobjoogayaal kale, ayaa u sheegay HOL in qaraxa markii uu dhacay kaddib uu jidku xirmay, ayna ciidammada dowladdu bilaabeen inay rasaas furaan, waxaana sarkaal u hadlay dowladda uu sheegay in qaraxaas ay dhinteen saddex qof oo shacab ah, ayna ku dhaawacmeen saddex askari.
“Qaraxa oo ahaa mid miino, waxaa lala beegsaday gaari uu watay sarkaal ka tirsan ciidammada dowladda, waxaa dhaawacyo ay kasoo gaareen saddex askari, saddex qof oo shacab ahna way ku dhinteen, mana jirto khasaare intaas ka badan oo ka dhashay,” ayuu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidammada dowladda ee ku sugan isgoyska ex-koontarool Afgooye Axmed C/llaahi.
Qaraxan, kaddib ayaa waxaa ka billowday agagaarka kulliyada Jaalle Siyaad, dagaal u dhexeeyay ciidammada AMISOM iyo kuwa dowladda oo dhinac ah iyo xoogagga Xarrakatul Shabaab, kaasoo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay.
Jidka Warshadaha oo dhinaca koonfureed ee magaalada Muqdisho mara, ayaa ah midka keliya ee isku xira qaybaha ay dowladdu maamusho iyo kuwa ay Xarrakatul Shabaab maamusho, waxaana inta badan ka dhaca qaraxyo iyo iskahorimaadyo khasaare sababa